घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईन्छ
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा सबैभन्दा परिचित छ "रोल्स रॉयस“। हाम्रो रुबेन नेव्यूस स्टोरी प्लस अनटल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको मितिमा उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता तपाईंको लागि ल्याउँदछ। विश्लेषणमा उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रख्यात हुनु अघिको जीवन कहानी, प्रख्यात कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवन शामिल छ।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको सानो कद र नरम रूपमा बोल्ने क्षमताको बारेमा। यद्यपि रुबान नेभको जीवनी मात्र थोरैले मात्र विचार गर्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
तर, प्रारम्भिक जीवन र परिवार पृष्ठभूमि
सुरु गरेर, उसको पूरा नाम रेबेन डियोगो दा सिल्भा नेभ्स हो। रुबेन नेवेजको जन्म १ 13 1997 March मार्च १ his तारिखमा उनका आमा बुबा श्रीमती र श्रीमती जोसे नेभमा पोर्तुगाली शहर मोजोलोसमा भएको थियो। रुबेन नेभ आफ्नो सानो बहिनी, भान्सा नेभसँग उनको सानो मध्यम-वर्ग परिवारमा हुर्केका थिए।
उसको बाल्यकालदेखि नै, रुबेन एफसी पोर्टोको प्रशंसकको रूपमा चिनिन्छन्। एसाइडहरू जहिले पनि आफ्नो मनपर्ने कपडा लगाउँदछन्, एफसी पोर्टो जर्सी, रूबन पनि उनको खुट्टा मा बल हरेक पल्ट जान्दथे। अब किन उसको खुट्टामा बल?
यसको कारण हो कि उसका आमाबुबाको रिटेल खेलकुदका सामानहरू थिए. पछि सानो बच्चाको रूपमा, रुबेन नेभ्सको आमा र बुबाले मोजेलोस शहरमा खेलकुद स्टोरको स्वामित्व पाउनुभयो। यसको लागि धन्यवाद, रुबेनको लागि कुनै नयाँ एफसी पोर्टो जर्सी लगाउन सकर थियो र एक फुटबल बल उसको नजिक राख्नुहोस्।
खेलकुद वस्तुहरू बेचेको आमाबाबुले जस्तै, रूबनले आफैंसँग आफुसँग फुटबल खेलेका थिए।
उनले कसरी आफ्नो परिपक्व व्यक्तित्व पाए: एक कुरा चाँडै रूबिन नेविसको बारेमा स्पष्ट थियो। यो उहाँ हो "परिपक्व व्यक्तित्व" जो तिनको बचपनको समयबाट तिनमा विकास भयो र अहिले आधुनिक दिनमा सारिएको छ। यो उमेरको लामो परिपक्वताको बारेमा बोल्दै टेलीग्राफरुबिनले एक पटक भने।
"म सधैं यो [परिपक्व] जस्तै थियो, सम्भवतः मेरो आमाबाबुको कारण। तिनीहरूले सधैं मलाई यो जिम्मेवारी दिए, बढ्न र छिटो सिक्न, "
उसले जारी राख्यो ...
“म नौ वर्षको हुँदा मेरो बुबा [जोस] तीन वर्ष काम गर्न स्पेनमा जानुभयो र म पोर्चुगलमा थिएँ। एक महिना उसलाई मात्र भेट्न गाह्रो थियो। म मेरी आमा र मेरी बहिनीसँग एक्लै थिएँ, जो मभन्दा कान्छी थिई। यो त्यस्तो समय हो जुन मैले उनीहरूको ख्याल राख्ने मानसिकतालाई विकृत बनायो। यसले गर्दा म आफू जस्तो परिपक्व हुन सम्भव भएको हुन सक्छ। ”
एक संदेह बिना, फुटबल बललाई माया गर्दै, उनको आमाबाबु फुटबल किट बेच्दै र फुटबल खेलिरहेका आफ्ना रिसावहरुलाई देख्न निश्चित रूपले रूबिनको क्यारियर पथ को परिभाषित गर्न मद्दत गर्यो। बस उनको रिश्तेदारहरू जस्तै, रूबेन आफ्नो मोजेलोस स्थानीय टोली लुसुनिशिया डे लुरोसाको रोस्टरमा नामांकन गरे। युवा क्लबको साथ खेल्दा, उनी पोर्टोको लागि उच्च अपरिचित सपना थिए, त्यो बचपन पछि समर्थित क्लब।
रुबेनले आफ्नो एफसी पोर्टो सपना साकार गर्न जोसका साथ कहिल्यै हार मानेनन् जुन उनले क्लबको युवा श्रेणीको साथ सफल परीक्षण पछि गरे। तल happy बर्षको उमेरमा पोर्टोको युवा प्रणालीमा सामेल भएपछि तल खुसी रूबेन छन्।
एकेडेमीसँगको समयमा रुबेनलाई प्याड्रोन्स एफसीमा loanणमा सिजन खर्च गर्न पठाइएको थियो जसले एफसी पोर्टोको बहिनी शाखाको रूपमा काम गर्थे। उनको समयमा एफसी पोर्टो युवा संरचना, उनीसँग खेलाडीका रूपमा वर्णन गरिएको थियो “असाधारण मानसिक गुणहरू, प्राविधिक र सामरिक कौशलसँगसँगै जानुहोस्"।
तर, ब्रेकिंग रेकर्डहरू
रुबेन १ 17 वर्षको धेरै कलिलो उमेरमा पोर्टो सीनियर टोलीमा सीधै “हामफाल” गरी। उनी यति प्रतिभाशाली र निडर थिए। रुबेनले तत्काल प्रभाव पारे पनि उनले एफसी पोर्टो वरिष्ठ टोलीमा काम गरे। तुरुन्तै, आफ्नो युवा पेशेवर क्यारियर मा, रुबेन रेकर्ड तोड्न शुरू भयो। रुबेन नेभ्स दुबै राष्ट्रव्यापी र यूरोपीय रेकर्ड तोड्यो जसले फुटबलको दुनियालाई तूफानले थाल्यो। यहाँका प्रारम्भिक रेकर्डहरू छन्।
पहिलो राष्ट्रिय रेकर्ड: रूबेन नेभिस एफसी पोर्टोको इतिहासको सबैभन्दा कान्छो खेलाडी बन्नुभयो जो प्राइमिर लीगामा गोल गरे।
राष्ट्रिय रेकर्ड: 17 वर्षको उमेरमा,5महिना र7दिन, रुबेन नेभिसे तोड्यो क्रिस्टियानो रोनाल्डोको रेकर्ड (17 वर्ष,6महिना र9दिन)। उनी च्याम्पियन्स लीग खेल्न सबैभन्दा सानो पोर्चुगल खेलाडी बने।
युरोपेली रेकर्ड: २०१//१2015 सत्रमा रुबेनले च्याम्पियन्स लिगमा कप्तान कप्तान सबैभन्दा कान्छो खेलाडी भएको रेकर्ड तोडे (१ to बर्ष र म्याकबी तेल अवीव बिरूद्ध २२१ दिन)। त्यो रेकर्ड अझै पनि एक जवान उमेर को लागी आफ्नो परिपक्वता धन्यवाद लेख्न को समय मा पकड।
राष्ट्रिय रेकर्ड: अन्तमा, रूबनले पोर्टोको लागि 50 गेमहरूमा पुग्न सबैभन्दा सानो खेलाडीको रेकर्ड गर्यो। यो उहाँले 18 वर्ष र 267 दिनको उमेरमा पूरा गर्नुभयो।
तर, जर्ज मिन्डेस प्रभाव
युवाको रूपमा रुबेनको अद्भुत रेकर्डले प्रो फुटबल प्रतिनिधित्व र सुपर एजेन्टको टाइटन बनायो जर्ज मेन्डेस वर्ष 2014 मा उनको रुचि राख्नु।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… जर्ज मेन्डेसको विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय फुटबल एजेन्सी गेस्टिफुट इन्टरनेसनलको स्वामित्व छ। ऊ शीर्ष ग्राहकहरूको लागि सुपर एजेन्ट हो जस्तै Jose Mourinho, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेम्स Rodriguez, एन्जिल डि मारिया, बर्नार्डो सिल्वा र डिएगो कोस्टा.
रुबेन नेभ्सले एकपटक जर्ज मिन्डिजको बारेमा राम्रोसँग बोल्नुभयो;
"जर्ज मन्डेससँग व्यवहार गर्न एक विनम्र र असल व्यक्ति हो। उहाँका सम्पर्कहरू शक्तिशाली छ। उनीहरूले प्रायः कुनै क्लबमा एक खेलाडी राख्न सक्छन्, त्यो धेरै प्रसिद्ध छ !.
युरोपमा सबै शीर्ष क्लबहरू बीच, जर्ज मेन्ड्स रुबिनलाई वल्भरहाम्टन वाउन्डर्समा गएर सहमतिमा सहमत गर्न सल्लाह दिए, त्यसपछि तिनको अनुकूलन दोस्रो दोस्रो अंग्रेजी प्रभाग क्लब थियो। प्रशंसक अपेक्षाहरु विरुद्ध, रुबेन नेभेसले दुई कारकलाई धन्यवाद दिएकाले उनको चाल उत्प्रेरित गरे। पहिले पहिले मालिक संग जर्ज मिन्डिज निकटता को कारण थियो नुनु एस्पेरिटोटो सान्टो जसलाई उनको बिना, उनको गेस्टिफ्यू कहिल्यै बनाइएन। रुबेन दुवै पुरुषमाथि भरोसा राखे।
दोस्रो कारण थियो कि रूबिन नेविसले आफ्नो पूर्व पोर्टो मालिक, नुन एस्पिरिटो सेन्टसँग एकताबद्ध बलियो इच्छा महसुस गरे जुन उनीहरूले विश्वास गर्छन् कि उनी उनीहरूको चाहना गर्न सक्छन्।
तर, भ्वावरहेम्पटन उठ्यो
भेल्विसमा सम्मिलित भएपछि, रुब केवल उसको पूर्व मालिकसँग पुनर्मिलनको लागि मात्र थिएन नुनो एस्पेरिटोटो सान्टो। उनले आफूलाई आफ्नै पोर्चुगल भाइबहिनीहरूको लामो सूचीसँग एकताबद्ध भएको देखे जुन जर्ज मिन्डिजका ग्राहकहरू पनि हुन्। पोर्चुगल ताराहरूको लामो सूची जारी हुँदा क्लबमा बसिरहेको थियो। लेखनको समयमा यो सूचीमा समावेश छ; Diogo Jota, हेडर कोस्टा, जोओओ माउन्टिनो, Rui Patricio र अन्य चित्रहरू तल चित्रित छन्।
अर्को राष्ट्रिय रेकर्ड तोड्दै: वोल्भरहेम्प्टनको एक खेलमा रुबेन देखा परेका आफ्ना साथीहरू माथि चित्रमा उनीले भेल्भ्स क्लब र लिगको रेकर्ड तोडेको देखाउँदै सुरु Portuguese-लाइनमा सबैभन्दा धेरै पुर्तगाली खेलाडीहरू थिए।
दुर्व्यवहार गलत गर्दै: सुरुमा धेरै प्रशंसकहरूको विचारमा थिए कि नेभ्सले गलत हल्ला स्थानान्तरणको निर्णय अफवाहको साथमा गरे कि "कसरी एक ठूलो खेलाडीले जस्तै अंग्रेजी अंग्रेजी विभाजनमा सामेल हुन सक्छ!“। प्रशंसकहरूलाई श fans्का गर्नु अघि यसले केही समय लिएन किनभने वोल्भरहेम्प्टन उनका लागि हुर्काउन उत्तम क्लब थिए। यो तलको भिडियोमा स्केमर गोलहरू पछि उसको नेभको स्क्रीमर पछि आए;
पुरस्कार: अप्रिल 2018 मा, रूबेन ईएफएल च्याम्पियनशिप प्लेयर को सीजन र युवा खेलाडीको सिजन अवार्डका लागि नामांकन गरिएको थियो।
Zidane Chant भन्दा राम्रो: एउटा अत्यन्त विवादास्पद मन्त्र भनेको रुबेनको इ England्ल्याण्डमा प्रभुत्व जमाउने कुरा हो। भेल्भो फ्यानहरूलाई, नेभहरू भन्दा राम्रो छ Zidane। तल हेर्नुहोस् तल;
तर के त्यो सम्भव छ?… निदा जिदान भन्दा राम्रो छ ?? बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
प्रत्येक सफल पोर्चुगल खेलाडीको पछाडि, त्यहाँ साँच्चै एक ग्लैमरस प्रेमिका वा पत्नी हो। त्यो ग्लैमरस पत्नी डेबैरा लोरेंन्को व्यक्ति मा देखिन्छ जुन रुबिन नेविस को लागि सुन्दर साथी हो।
दुबै प्रेमीहरू एक अर्कासँग एफसी पोर्टोमा रूबेनको समयमा परिचित भए। आफू इ England्गल्यान्ड आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा रुबेनले एक पटक सही योजना बनाउने निर्णय गरे। एउटा योजना जुन बाबुआमामा हुनुपर्दछ जसरी उनी भोल्फमा चाँडै नै नयाँ जीवन पाउने थिए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… रुबेनलाई वोल्भ्स परिवारमा स्वागत गरिएको थियो त्यहि समयमा उनकी प्यारी छोरी छोरी मार्गारीडा पोर्तुगालमा जन्मेकी छिन्। त्यो दिन, एक बेचैन रुबेन आफ्नो मार्फत आफ्नो बच्चाको फोटो माग्नु पर्‍यो इन्स्टाग्राम.
उनको पहिलो खेल पछि अ English्ग्रेजी अखबारसँगको पहिलो अन्तर्वार्तामा, जुन उनको बच्चाको जन्म दिन पनि थियो, रुबेन नेभ्सले सनस्पोर्टलाई भनेः
“उनीहरूलाई नहेर्नु सबैमा गाह्रो हिस्सा हो। तर सामाजिक सञ्जालका लागि भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस् किनकि आजकल यो यति सजीलो सम्पर्कमा आउन सजिलो छ - यो उनीहरू जस्तै यहाँ छ। "
मिडफिल्डर जसले 20 उमेरको उमेरमा आफ्नो पहिलो खेलको खेलमा पोर्चुगललाई उडान गर्न थाल्नुको साथै उनीहरूको साझेदार डेबरा र बेबी छोरी मार्गीडालाई भेट्न। तपाईं पनि इंग्ल्याण्डमा राम्रो बसेर रूबेन गर्नु भयो, यो नयाँ नवजात बच्चाबाट टाढा गाह्रो हुन्छ र हप्ताको लागि साझेदार हुन्छ।
रुबेन नेभेसको लागि, त्यहाँ बुबा बन्ने अविश्वसनीय भावनाको लागि कुनै व्याख्या छैन। रूबेन साँच्चै एक ठूलो बुबा हो जसले फराकिलो आनन्द पाउँछ।
रबिनको समयको रूपमा नै पहिले नै उनको पत्नी र छोरीसँग टिट्टेनगलको सानो गाँउमा ब्वालहाम्प्टनको मोलिनिनक्स स्टेडियमबाट दुई माइलसँगै फेरि भर्खरै पुनर्जन्म गरिएको छ।
कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कता कहीँ। रूबिन मित्रवत छ र अक्सर परिवारका रिश्तेदार र घनिष्ठ साथीहरूको कम्पनीमा भेटिन्छ।
उहाँ एक निस्सन्देह व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले सधैं अरूलाई मदत गर्न इच्छुक छ, कुनै पनि पछाडि प्राप्त गर्न आशा बिना।
खाना: रुबेनले बेलाबेला पोर्चुगलको भित्री भावनालाई पनि प्रेम गर्दछ। उनको मनपर्ने स्थानीय हजुरआमा अझै बाँकी छ अरोमास डे पोर्चुगल, एक पोर्चुगल कफी र खाना पसल।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… भोल्भरहेम्प्टनमा लगभग सबै पुर्तगाली खेलाडीहरू अरोमाको आपूर्ति गर्न मन पराउँछन् Pastel de Natas, कमाण्डर tarts जुन तिनीहरूको देशमा धेरै प्रिय छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Ruben नेभेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
Leender Dendoncker बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 25